HDDSCAN: IHE OMUME, OTU ESI EJI, NYOCHAA - DISK - 2019
Nrụ ọrụ nke teknụzụ kọmputa bụ nhazi data nke e gosipụtara na ụdị ntanetị. Ọnọdụ nke mgbasa ozi na-ekpebi izu ike nke kọmputa, laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ụgbọelu ahụ, ọrụ nke ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ na-efunahụ ihe ọ pụtara.
Omume na data dị mkpa, mmepụta nke oru ngo, ịhazi nchịkọta na ọrụ ndị ọzọ chọrọ ijide ntụkwasị obi nke ozi, nyochaa mgbe nile nke steeti mgbasa ozi. Maka nlekota na nyocha, a na-eji usoro dịgasị iche iche chọpụta ọnọdụ na nhazi nke akụ. Tụlee ihe usoro ihe omume HDDScan bụ maka, otu esi eji ya, na ihe ike ya.
Ụdị ihe omume na ihe dị mkpa
Download na Gbaa ọsọ
Vidio ndị yiri ya
HDDScan bụ ihe bara uru maka mgbasa ozi nchekwa (HDD, RAID, Flash). Ejiri usoro a iji chọpụta ngwaọrụ nchekwa maka ọnụnọ BAD-blocks, lee àgwà S.M.A.R.T nke ụgbọala ahụ, gbanwee ntọala pụrụ iche (njikwa ike, mmalite / nkwụsị nke mkpịsị ụkwụ, gbanwee usoro mkpuchi).
A na-ekesa akwụkwọ mkpesa (nke bụ, nke na-adịghị achọ ntinye) na Weebụ maka n'efu, mana ngwanrọ na-ebudata ngwa ngwa site na akwukwọ ọrụ: //hddscan.com/ ... Ihe omume a dị oke ọnụ ma na-ewe naanị 3,6 MB nke ohere.
Nkwado Windows operating system sitere na XP ruo mgbe e mesịrị.
Ndị isi nke ngwaọrụ eji arụ ọrụ bụ diski ike na mmechi:
FireWire ma ọ bụ IEEE1394;
USB (maka ọrụ enwere ike).
The interface na nke a bụ ụzọ jikọọ diski ike na motherboard. A na-arụ ọrụ na ngwaọrụ USB, mana enweghi ike ịrụ ọrụ. Maka ngwa draịvụ ọ ga-ekwe omume ịme ọrụ ule. Ọzọkwa, ule bụ nanị ụdị nyocha nke RAID-arrays na mpaghara ATA / SATA / SCSI. N'ezie, usoro HDDScan nwere ike iji ọrụ ọ bụla nwere ike iwepu na kọmpụta, ma ọ bụrụ na ha nwere nchekwa data ha. Ngwa ahụ nwere ọrụ zuru oke ma nye gị ohere inweta nsonaazụ kacha mma. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọrụ nke ọrụ mmekọ HDDScan anaghị agụnye usoro mmezi na mgbake, ọ bụ naanị maka nchọpụta, nyocha na njirimara nke ebe nsogbu nke disk diski.
nkọwa zuru ezu banyere disk;
nyocha ule site na iji usoro di iche iche;
ele ihe anya S.M.A.R.T. (ihe nyocha nke onwe onye nke ngwaọrụ, ịchọpụta ndụ zuru ezu na ọnọdụ zuru ezu);
ngbanwe ma ọ bụ na-agbanwe AAM (ụda olu) ma ọ bụ ọnụọgụ APM na PM (njikwa ikike dị elu);
egosiputa ihe ngosi nke ihe ngbochi nke ihe siri ike n'ime ihe oru ahu iji mee ka nlekota anya.
Ị nwere ike ịchọta ntụziaka maka iji usoro CCleaner bara uru:
Download faịlụ HDDScan.exe ma pịa bọtịnụ aka ekpe ka ị malite.
Pịa "M Kwere", mgbe ahụ windo ahụ ga-emeghe.
Mgbe ịmalitegharịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo mepee window nke usoro ihe omume ahụ. Usoro a dum na-eme iji chọpụta ngwaọrụ nke ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ, ya mere a na-ewere ya na usoro ahụ adịghị mkpa ka a rụnye ya, na-arụ ọrụ na ụkpụrụ nke ọtụtụ ngwa. Ihe a na - eme ka ikike omume ahụ dịkwuo ukwuu site na ikwe ka onye ọrụ ahụ na - agba ya na ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ site na netwọk nwere ike iwepu n'enweghị ikike nchịkwa.
Oghere ndị bara uru bụ isi dị mfe na nkenke - na akụkụ nke elu, e nwere ubi na aha onye nchekwa.
Ọ nwere àkụ, mgbe ọ gụrụ, ndepụta ndepụta nke ndị niile na-ejikọta na windboard gosipụtara.
Site na ndepụta ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ mgbasa ozi ịchọrọ ịnwale.
N'okpuru ebe a bụ bọtịnụ atọ iji kpọọ ọrụ ndị bụ isi:
S.M.A.R.T. Ozi Health General. Ịpị na bọtịnụ a na-eweta windo onwe-diagnostic, nke niile gosipụtara diski diski ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ;
AJỤRỤ Nyocha na Wright. Ịmalite usoro iji nwalee diski diski. E nwere 4 ụdị ule dịnụ, Nyochaa, Gụọ, Ụgha, Nhichapu. Ha na - emepụta ụdị ego dị iche iche - site na ịchọta ịgụ ọsọ ọsọ iji chọpụta ndị dị njọ. Ịhọrọ otu ma ọ bụ ọzọ nhọrọ ga-eme ka a igbe na-amalite usoro nyocha;
AKWỤKWỌ Ozi na Atụmatụ. Njikwa oku ma ọ bụ ikenye ọrụ achọrọ. 5 ngwaọrụ dị, DRIVE ID (data njirimara na ụgbọala a na-arụ ọrụ), Atụmatụ (njirimara, ATA ma ọ bụ SCSI windo windo mepee), SMART TESTS (ike ịhọrọ otu n'ime nyocha atọ), TEMP MON (ngosi nke ọnọdụ dị ugbu a nke mgbasa ozi), COMMAND (mepee akara iwu maka ngwa).
N'okpuru ala nke windo isi, a na-edepụta nkọwa nke ụgbọelu mmụta ahụ, nhazi ya na aha ya. Ọzọ bụ njikwa ọrụ njikwa - windo ozi maka ịfe ule ugbu a.
Ọ dị mkpa ịmalite nyocha ahụ site n'ịmụ akụkọ S.M.A.R.T.
Ọ bụrụ na enwere akara akara na-esote na agwa ahụ, mgbe ahụ, enweghi ikewapụ ọrụ
A na - ahọpụta ọnọdụ niile na - arụ ọrụ ma ọ bụ na - akpata nsogbu na akara ngosi acha ndụ ndụ. Enwere ike ịda ma ọ bụ obere ntụpọ akara na triangle odo na akara akara. Nsogbu siri ike na-acha uhie uhie.
Gaa na nhọrọ nlele.
Họrọ otu n'ime ụdị ule.
Ule bụ usoro ogologo nke chọrọ oge ụfọdụ. N'uzu, ọ ga-ekwe omume iduzi ọtụtụ ule n'otu oge, ma na omume a adịghị atụ aro ya. Usoro mmemme ahụ adịghị enye akwa ma dị mma na ọnọdụ dị otú a, ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọtụtụ ụdị ule, ọ ka mma iji obere oge ma mee ha. Nhọrọ ndị a dị:
Chọpụta. Ọ na-enyocha ụgbụ na-agụ ọsọ nke ozi, na-enweghị na-ebufe data site na interface;
Na-agụ. Na-enyocha ịgụ ọsọ na ntinye data site na interface;
Ntuba. Na-enyocha ọsọ ahụ a na-agụ na nnyefe na ntanetị, rụrụ na usoro ụfọdụ: akpa nke mbụ, nke ikpeazụ, nke abụọ, nke nke atọ, nke atọ ... na ihe ndị ọzọ;
Ghichapu. A na-ederede nkwụsị ozi nyocha pụrụ iche na diski. Lelee njirimara nke ndekọ, ịgụ, kpebisie ike site na ọsọ nke nhazi data. Ozi na mpaghara a nke diski ga-efu.
Mgbe ịhọrọ ụdị ule, windo gosipụtara:
ọnụ ọgụgụ ndị mbụ a ga-enyocha;
ọnụ ọgụgụ nke blocks ka a nwalee;
ọnụ ọgụgụ nke otu ngọngọ (ọnụ ọgụgụ nke ndị LBA dị na otu ngọngọ).
Dee nhọrọ nyocha diski
Mgbe ị pịa bọtịnụ "Right" ahụ, a na-agbakwunye ule ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ahu nke nwere ihe omuma ugbu a banyere iketa ule na-egosi na windo njikwa. Otu ntinye na ya na-eweta menu nke ị nwere ike ịnweta ozi banyere nkọwa nke usoro ahụ, kwụsịtụ, kwụsị, ma ọ bụ kpochapụ ọrụ ahụ kpamkpam. Ịpị ugboro abụọ na akara ahụ ga-ewetara windo ihe ọmụma zuru ezu banyere ule ahụ n'oge na-egosi ihe ngosi nke usoro ahụ. Window nwere nhọrọ atọ maka nlele, n'ụdị nke eserese, map ma ọ bụ ngọngọ nke data ntinye. Nhọrọ dịgasị iche iche na-enye gị ohere ịnweta ozi zuru ezu na njirimara banyere ọrụ ahụ.
Mgbe ị pịa bọtịnụ TOOLS, menu ngwá ọrụ ahụ dị. Ị nwere ike ịnweta ozi gbasara mpaghara anụ ahụ ma ọ bụ ezi uche dị na diski ahụ, nke ị ga - eji pịa DRIVE ID.
E gosipụtara ihe mgbasa ozi site na mgbasa ozi na tebụl dị mma.
Akụkụ Atụmatụ na-enye gị ohere ịgbanwe ụfọdụ nke mgbasa ozi (ma e wezụga ngwaọrụ USB).
Na mpaghara a, ị nwere ike ịgbanwe ntọala maka mgbasa ozi ma e wezụga USB.
belata ọkwa ụzụ (ọrụ AAM, ọ bụghị na ụdị diski niile);
gbanwee usoro ntụgharị ihughari, na-enye ume na nchekwa ego. Na-agbanwe ọsọ nke ntụgharị, ruo nkwụsị zuru oke n'oge arụghị ọrụ (ọrụ ARM);
mee ka eriri ahụ kwụsị igbu oge (PM ọrụ). Nkwụnye ahụ ga-akwụsị ozugbo mgbe oge a kapịrị ọnụ, ọ bụrụ na diski adịghị arụ ọrụ n'oge ahụ;
ikike ịmalite ịmalite ozugbo na arịrịọ nke usoro mmemme ahụ.
Maka disks na SCSI / SAS / FC interface, enwere nhọrọ iji gosipụta njirimara ntụle achọpụtara ma ọ bụ ntụpọ anụ ahụ, yana ịmalite ma kwụsị akara.
Ọrụ SMART TESTS dị na nhọrọ 3:
obere Ọ na-adịru oge nkeji 1-2, a na-elele diski ahụ na nyocha ngwa ngwa nke usoro nsogbu;
agbatị. Oge - ihe dị ka awa 2. A na-enyocha ndị mgbasa ozi, a na-enyocha ego nlele;
ebufe (njem). Na-ewepụta nkeji ole na ole, duziere ihe nlekota ngwá electronic na nchọpụta nke nsogbu.
Nlele nlele nwere ike ịdịru ruo awa 2
Ọrụ TEMP MON na-enye gị ohere ịchọpụta ogo nke ikpo ọkụ na oge ugbu a.
Usoro ihe omume a nwere ntaneti mgbasa ozi
Ihe bara ezigbo uru, ebe ọ bụ na ikpo oke ọkụ nke ụgbọelu ahụ na-egosi nbelata nke enyemaka nke akụkụ ndị na-agagharị na mkpa iji dochie diski iji zere ọnwụ nke ozi bara uru.
HDDScan nwere ike ịmepụta akara iwu wee debe ya na faịlụ * .cmd ma ọ bụ .bat.
Usoro mmemme ahụ na-akọwaghachi akụkụ nke mgbasa ozi
Ihe nke ihe a pụtara bụ na nkedo nke faịlụ dị otú ahụ na-amalite mmalite nke usoro ihe omume ahụ na ndabere na nlọghachị nke arụmọrụ ọrụ disk. Enweghị mkpa iji aka gị tinye ogige ndị dị mkpa, nke na-azọpụta oge na-enye gị ohere ịtọ usoro a chọrọ iji rụọ ọrụ n'enweghị njehie.
Iduzi nlele zuru oke na ihe niile abụghị ọrụ onye ọrụ. A na-enyochakarị ihe ụfọdụ ma ọ bụ ọrụ nke diski ndị na-enwe obi abụọ ma ọ bụ chọrọ nyochaa mgbe niile. Enwere ike igosi ihe kachasị mkpa dị ka akụkọ nyocha ọhụụ zuru ezu, nke na-enye nkọwa zuru ezu banyere ịdị adị na ibu nke nsogbu ndị ahụ, yana nlele nyocha nke gosipụtara ọnọdụ ala n'oge ọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ihe omume HDDScan bụ onye inyeaka na-enweghị mgbagwoju anya ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya na nke a dị mkpa, ngwa ngwa na-akwa. Ikike nke nyochaa ọnọdụ nke draịva siri ike ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ na-ejikọta na motherboard nke kọmputa, na-eme ka nchekwa nke ozi ma dochie diski na oge mgbe e nwere ihe ịrịba ama dị egwu. Enwepu ihe ọ rụpụtara ọtụtụ afọ nke ọrụ, ọrụ ndị dị ugbu a ma ọ bụ naanị faịlụ ndị dị oké ọnụ ahịa nye onye ọrụ ahụ adịghị anakwere.
Gụkwa ntụziaka maka iji usoro R.Saver:
Nnyocha nke oge na-enyere aka iwelie ndụ ọrụ nke diski ahụ, na-arụ ọrụ arụ ọrụ, chekwaa ike na ndụ ngwaọrụ. Enweghị ọrụ pụrụ iche site n'aka onye ọrụ, ọ bụ iji malite usoro nkwenye ahụ ma rụọ ọrụ ọ bụla, a ga-arụ ọrụ niile na-akpaghị aka, yana enwere ike ịdekọ ma ọ bụ chekwaa ozi ederede.